Nezařazené – Tokenization Somalia
Tokenization wuxuu ganacsigaaga ku xirayaa tiknoolajiyada xannibaadda iyo soo saarista astaamahaaga ganacsi, kuwaas oo mabda ‘ahaan ula mid ah saamiyada. Markaad ku xidho xannibaadda, waxaad tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ugu samayn kartaa dhammaan howlaha …
Continue reading "Waa maxay calaamadeynta sidee se u soo nooleyn kartaa dhaqaalaha"
Tokenization waa mid ka mid ah saameynta ugu xiisaha badan ee tikniyoolajiyadda xannibaadda. Wanaagsan, calaamadda xannibaadda ayaa lagu dabaqi karaa wax kasta. Laga soo bilaabo badeecadaha, hantida shirkadda, cinwaanada, aqoonsiyada, guryaha illaa shay kasta oo ka taga khadka wax soo …
Continue reading "Waa maxay calaamadeynta"
Qiyaasta dhowaanahan waxay sheegaysaa in qiimaha hadda ee dhammaan hantida dunida dhabta ah ee adduunka ay gaarayaan $ 256 tiriliyan.In kasta oo tiradan hoos u dhacaysa ay tahay mid xasilloon, haddana dhammaan hantidani si joogto ah ayay gacmaha isu beddelaan. …
Continue reading "Maxaa loo calaamadeeyay"
Tokenization waa mid ka mid ah saameynta ugu xiisaha badan ee teknolojiyadda xannibaadda.Nidaamkani wuxuu ballan-qaadayaa inuu bulshada u beddelayo aragti maadi iyo ganacsiba leh, halkaas oo qof walba uu ku qanacsan yahay kuna ganacsan karo shey kasta oo ku saleysan …
Continue reading "Faa’iidooyinka calaamadaha"